Heshay sharciga deggenaanshada oo Iswiidhan
If you have been granted a residence permit in Sweden
Granted a residence permit in Sweden
Heshay sharciga deggenaanshada oo Iswiidhan Komponentåtgärdsmeny
Text Fått uppehållstillstånd i Sverige somaliska Komponentåtgärdsmeny
Meeshaan adiga waxaad ka akhrisankartaa waxa ey tahay Qasnadda caymiska (Försäkringskassan) iyo lacagaha kaalmada suurtagalikaro inaad xaq u lahaatid adiga markaa heshid sharciga deggenaanshada joogtada ama sharciga deggenaanshada kusii meel gaarka oo Iswiidhan.
Waa maxay Försäkringskassan?
Qasnadda caymiska (Försäkringskassan) waa xafiis dawladeed oo lacag siiya qoysaska caruur haysta, dadka xanuusanaya/jirran iyo dadka laxaadkoodu dhimanyahay/curyaannada. Lacagtaas waxa lagu magacaabaa kaalmada.
Film ku saabsan dejinta
Filimkan waxa loogu tallo galay dadkiina ku cusub wadanka Iswiidhan isla markaana qaata lacagta dejinta (etableringsersättning).
Maxan ku kala duwan yiiin Qasnadda caymiska (Försäkringsakassan) iyo shirkad caymis gaar ah?
Shirkadaha caymiska gaarka ah waa in aad adigu bixiso lacag si aad ugashid caymiskooda. Waxa aad tusaale ahaan bixin kartaa lacag si aad caymis u galiso gurigaada ama baabuurkaaga.
Qasab miyaa inaa aniga iska diwaangaliyo Försäkringskassan?
Haddii adigu aad dalbanaysid lacag kaalmo
May uma baahnid inaad iska diiwaangalisid. Marka aad codsatid kaalmo lacageed waxay ay Qasnadda caymiska (Försäkringsakssan) baari doontaa inaad xaq uleedahay kaalmada lacageed ee aad dalbaday. Hadii aad xaq u leedahay kaalmadaa lacageed isla markaas ayaa lagu diiwaan galin doonaa.
Haddii adiga aadan soo codsaneen lacag kaalmo.
May adigu isma diiwaan galinaysid. Hadii aanad codsanayn kaalmo lacageed ma iska diiwaan galinaysid qasnadda caymiska (Försäkringskassan).
Haddii adiga haysatid carruur
Hadii aad leedahay caruur.
Hadii aad leedahay caruur ka yar 16 sanno, waanu kula soo xidhiidhi doonaa marka lagu diiwaan galiyo inaad degantahay wadanka. Markaas ayaanu baadhi doonaa inaad xaq uleedahay lacagta kaalmada caruurta (Barnbidrag) iyo kaalmooyinka kale ee qoysaska caruurta leh.
Hadii aad leedahay caruur ka weyn 16 sanno, waa inaad wargaliso Qasnadda caymiska (Försäkringskassan). Waxaanu markaas baadhi doonaa inaad xaq uleedahay lacagta kaalmada caruurta ee wakhtigeeda la dheereeyay (Förlängt barnbidrag) ama kaalmooyin dhaqaale oo kale.
Hadii aad timaado Iswiidhan adiga oon wadan caruur, uma baahnid inaad wax samayso. Laakin hadii ilmuhu kaa daba yimaadaan waa inaad wargaliso Qasnadda caymiska (Försäkringskassan). Waxaanu markaas baadhi doonaa inaad xaq uleedahay lacagta kaalmada caruurta (Barnbidrag) iyo kaalmooyinka dhaqaale ee kale ee qoysaska caruurta leh.
Waxaad wargalin kartaa in ilmuhu yimid mid ka mid ah xafiisyadayada adeega.
Ciwaanka oo xafiiska adeega
Ma helikara aniga caawinaad markaan codsanaayo lacag kaalmo?
Haa. Waxaa jira dhowr si oo aad caawinaad ku helikartid markey noqoto ka wardoonida lacagaha aad xaq u leedahay iyo sidaa u soo codsaneysid.
1. Boggaan internetka ka akhriso lacagaha kaalmada kala duwan.
Warbixintu waxay ku qorantahay iswiidhish iyo ingiriisi.
Hadii aad fahmaysid/taqaanid luqada iswiidhishka waxaad kaligaa naga ogaysiin kartaa oo aad ka codsan kartaa bogga internetka Mina sidor. Mina sidor waxa lagu heli karaa luqada iswiidhiska.
2. Soo booqo xafiiska adeega Qasnadda caymiska (Försäkringskassan) midkood.
Waxaad halkaa kula kulmi kartaa shaqaalaha Qadnadda caymiska (Försäkringskassan) waxaanad heli kartaa caawin si aad u ogaato waxyaabaha aad xaqa uleedahay iyo sida aad u codsankartid.
Hel meesha uu ku yaalo xafiis adeeg.
3. Dalbo ballan telefoon oo luqadaada hooyo ah.
Waxaad la hadli kartaa shaqaale ku hadla tusaale ahaan carabi, tigriini, af-soomali, ingiriis, turki, faransiis, isbaanish ama jarmal. Qofkaa shaqaalaha ahi wuxuu kaa caawin karaa inaad codsatid kaalmo lacageed.
Dalbo ballan telefoon afkaaga hooyo ah.
4. Weydii su’aal waxaanad jawaab ku heli kartaa ingiriisi bogga macaamiisha.
Meeshan waxaad waydiin kartaa su’aalo guud oo khusaysa lacagaha kaalmada ee ay bixiso Qasnadda caymiska (Försäkringskassan) waxaanad jawaab ku heli kartaa luqadaha ingiriisida, isbaanishka, fiinshka iyo boolishka.
Bogga macaamiisha ee luqadaha kale
Lacagaha kaalmada quseeya qofka helay sharciga deggenaanshada
Meeshan waxaad ka akhrisan kartaa warbixin ku saabsan lacagaha kaalmada ee aad xaq u yeelan karto marka aad hesho sharciga deggenaanshaha. Waxa jira cinwaan kasta hoostiisa goobo kuusii gudbin doona meel aad ka akhrisan karto warbixin dheeraad ah. Warbixintaasi waxay ku qorantahay iswiidhish iyo fiinish.
Kaalmada dhaqaale ee dajinta dadka cusub (Etableringsersättning)
Hadii xafiiska shaqada (Arbetsförmedlingen) uu kuu sameeyo barnaamijka dajinta dadka cusub waxaad Qasnadda caymiska (Försäkringskassan) ka heli kartaa kaalmada dhaqaale ee dajinta dadka cusub. Hadii aad leedahay caruur ama degantahay guri kaligaa waxa kale oo aad heli kartaa kaalmada dhaqaalaha ee caruurta (etableringstillägg) iyo kabista guriga (bostadsersättning).
Filin af-somali ah
Gunada caruurta (Barnbidrag)
Dhammaan dadka Iswiidhan oo carruur haysta oo ka yar 16 sano waxaa la siiyaa lacagta kaalmada carruurta (barnbidrag). Markuu ilmuhu buuxiyo 16 sano waa la joojinaya lacagta kaalmada carruurta (barnbidrag). Laakiin waxaa la helikara lacagta kaalmada carruurta la dheereeyay (förlängt barnbidrag) haddii caruurtu wali dhigto dugsiga aasaasigaHoose/dhexe.
Adiga ma helikartid lacagta kaalmada carruurta inta lagu siin lacagta nolol maalmeedka ey bixiyso Hey’adda socdaalka. Ma qaadan kartid lacagta kaalmada caruurta inta lagu siinayo lacagta nolol maalmeekda ay bixiso heyda’dda socdaalka/imigreeshanka.
Haddii adiga kula socdo carruur ka yar 16 sano markaa Iswiidhan imaaneysid waxaan kula soo xiriireynaa markii adiga lagu diwaangaliyo, sidaa adiga u helikartid lacagta kaalmada carruurta (barnbidrag). Haddii adiga kaligaa aad Iswiidhan imaatid ma ubaahnid inaa wax suubisid. Haddii canuga Iswiidhan imaawdo adiga kadib adiga waa inaad na soo ogeysiisaa inuu canuga imaaday.
Barnbidrag (warbixin af iswiidhish iyo ingiriisi ah)
Gunada waalidka (Föräldrapenning)
Lacagta gunnada waalidka (föräldrapenning) waa lacag lagu siinayo si aad fasax waalid u ahaankartid, oo laga wado inaad cunugga haynaysid meeshii aad ka shaqeyn lahayd, shaqo ka raadsan lahayd ama waxbarasho ka dhigan lahayd.
Ma qaadan kartid lacagta gunnada waalidka (föräldrapenning) inta lagu siinayo lacagta nolol maamleedka ay bixiso hay’adda socdaalka/imigreeshanka.
Inta uu cunuggaagu jiro marka uu Iswiidan yimmado oo uu degayo waxay saameyn ku yeelan kartaa inta maalmood ee lacagta fasaxa waalidka ee adigu ka waalid ahaan aad xaq uleedahay.
Haddii canuggu uu yahay 1 sano jir ama ka weynyahay marka uu Swiidhan degayo ugu badanaan 200 oo maalmood ayaa lacagta fasaxa waalidka lagu bixinayaa canugga.
Haddii canuggu uu yahay 2 sano jir ama ka weynyahay marka uu degayo Swiidhan ugu badnaan 100 maalmood ayaa lacagta fasaxa waalidka lagu bixinayaa canugga.
Föräldrapenning (warbixin af iswiidhish iyo ingiriisi ah)
Kabka guriga (bostadsbidrag)
Hadii aad leedahay caruur waxaad helikartaa kabka guriga (bostadsbidrag) hadii aad u baahantahay in lagaa caawiyo bixinta kirada ama qarashka bisha meesha aad ku nooshahay.
Waxa lagu siin karaa kabka guriga (bostadsbidrag) hadii aad ka yartahay 29 sanno oo aanad lahayn caruur.
Waxa aad heli kartaa oo kaliya kabka guriga hadii aad adigu iska leedahay guriga ama aad ku kiraysatay gacan koowaad ama gacan labaad. Laguma siin karo kabka guriga (bostadsbidrag) hadii aad qofkale gurigiisa ku nooshahay (inneboende) ama qayb ka mid ah gurigu kuu kiraysanyahay.
Kabka guriga (bostadsbidrag) oo qoysaska caruurta leh (warbixin af iswiidhish iyo ingiriisi ah)
Kabka guriga (bostadsbidrag) oo dhalinyarada (18-29 sanno) (warbixin af iswiidhish iyo ingiriisi ah)
Taagerada ciyaalka ee waalidka keligiis ah (Lacagta waxa loo shubaa waalidka kala maqan,isqabin. Hadaad isqabtaaan xaq umalihid lacagtaas)(Underhållsstöd)
Hadii adiga iyo caruurta waalidkod mid ahaan ay daan isqabin ama wada noolayn wa in waalidka kale aan la noolayn ciyaalka bixiyaa masruufkoda (lacag). Lacagtaas oo loo yaqaano Underhållssbidrag Hadii uu bixin waayo walaadka xaqa loogu leeyahay masruufka ciyaalka (underhållsstöd) waxaad ka dalbankartaa khasnada caymiska (Försäkringskassan).
Waalidka aan isla noolayn (warbixin af iswiidhish iyo ingiriisi ah)
Lacagta kaalmada ah ee la siiyo waalidka haysta caruurta naafada ah (vårdbidrag)
Hadii aad haysatid caruur naafo ah ama bukaan jiif ah ama ubaahan daryeel dheerad ah waxad xaq u yeelan kartaa lacagta loo yaqaano (vårdbidrag) si aad u buuxisid bahiyihiisa dheeradka ah.
Lacagta kaalmada ah ee la siiyo waalidka haysta caruurta naafada ah (vårdbidrag) (warbixin af iswiidhish iyo ingiriisi ah)
Kaadhka cafimaadka (EU-kort)
Kaadhka cafimaadka (EU-kort) waa kaadh aad xaq u yelan kartid daryeel cafimaad hadii aad u safartid oo ku xanuusatid wadamada yurubta EU/EES ama iswiizerland. Kaadhku wuxuu dabooli doona sida hadii xanuun degedeg ahi u kugu soo boodo.
EU-kort (warbixin af iswiidhish iyo ingiriisi ah)
Kaalmada kharashka ilkaha (tandvårdsstöd)
Kaalmada kharashka ilkuhu waa kaalmo dhaqaale hadii aad u baahantahay daryeelka ilkaha.
Dhamaan dadka ku nool iswiidhan isla markaana ka tirsan caymiska bulashadu waxay leeyihiin kaalmada kharashka ilkaha laga bilaabo sanadka qofku buuxiyo 23 sanno.
Caruurta iyo dhalinyarta waa lacag la’aan daryeelka ilkuhu gabi ahaan.
Kaalmada kharashka ilkuhu waxay ka koobantahay, kaalmada guud ee kharashka ilkaha, kaalmada ilkaha ee xaalado gaar ah iyo, damaanadda kharaska badan ee ilkaha.
Kaalmada kharashka ilkaha (tandvårdsstöd) (warbixin af-iswiidhish iyo ingiriisi ah)
Lacago Kaalmooyin oo kale
Bogga internetka waxaad ka heli karta warbixino badan oo lacagaha kaalmada ah.
Lacagaha kaalmada oo kale
Su’aalooyinka caadiyanka Komponentåtgärdsmeny
Waa maxay diwaangalinta bulshada?
Diwaangalinta bulshada waa liis ey ku qoranyahiin dadka Iswiidhan ku nool. Liiskaas waxaa ku qoran qofka magaciisa iyo meesha oo ku noolyahay. Hey’adda ku shaqo leh daryeelida liiska diwaangalinta bulshada waa Hey'adda cashuuraha (Skatteverket). Ka akhriso arrinta diwaangalinta bulshada bogga internetka ee Hey'adda cashuuraha (Skatteverket).
Skatteverket (skatteverket.se) öppnas i nytt fönster
Xaq miyaan u leeyahay inaan qaato wax guno/kaalmo ah hadii aan haysto sharci ku meel gaadh ah?
Haa. Xaq ayaad u leedahay inaad qaadato gunada/kaalmada lacageed sida dadka haysta sharciga abadiga ah (Permanent Uppehållstillstånd).
Qasab miyaa inaan ku jiro qasnada caymiska bulshada (Försäkringskassan) si aan u helo daryeel cafimaad hadaan xanuusado?
Maya, Khasab maaha inaad ku jirto qasnada caymiska ama aad ka diwaan gashan tahay si aad u hesho daryeel cafimaad.
Maxaa ku dhacaya lacagtayda markii sharcigeyga ku meelgaarka ah iga dhaco?
Waxaad ka heli kartaa Qasnadda caymiska (Försäkringskassan) lacagaha kaalmooyinka qaar, xitaa marka uu dhamaado wakhtiga sharcigaaga degenaanshaha ku meel gaarka ahi ee aad sugayso go’aanka hay’adda socdaalka (Migrationsverket) ee kordhinta sharciga.
Si aad u heli karto waa in aad:
Dalbato kordhinta sharcigaaga degenaanshaha ka hor inta aanu kaa dhicin sharcigaagu.
Ku dalbato kordhinta sharcigaaga degenaanshaha isla sababtii aad ku dalbatay sharcigaaga hadda aad haysato.
Warbixin dheeraad ah waxaad ka heli kartaa bogga internetka ee hay’adda socdaalka (Migrationsverket):
Frågor och svar om förlängning av tidsbegränsade uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen (migrationsverket.se)
Hadii aad diidmo ka heshid hay’adda socdaalka(Migrationsverket)
Hadii aad ka dacwooto go’aanka hay’adda socdaalka (Migrationsverket) waxaad lacag ka heli kartaa Qasnadda caymiska (Försäkringskassan) inta aad sugaysid go’aan cusub. Haduu aanad ka dacwoon go’aanka waxay Qasnadda caymisku (Försäkringskassan) joojinaysa inay bixiso lacagaha lagu siiyo.
Relaterade länkar När du har fått uppehållstillstånd i Sverige somaliska Komponentåtgärdsmeny
Goobo kale oo la xidhiidha
Meeshaan baa adiga ka heli caawinaada Qasnadda caymiska (Försäkrings­kassan)
La hadal xarunta macaamisha
Soo booqo xafiiska adeega Qasnadda caymiska (Försäkringskassan) midkood.
Meel macaamishu suaale isku weydarsadan luqada ingirisiga öppnas i nytt fönster
Warbixintaan oo luqado kale
carabi (اللغة العربية)